Daraasad cusub oo British ah oo sheegtay in Salaaddu ay yareeyso xanuunadda dhabarka - Horn Future
London –Daraasad cilmiyeed cusub ayaa sheetgay in dhaqdhaqaaqa joogtadda ah ay sameeyaan Muslimiintu inta lagu jiro salaadda in ay yareeyn karaan laxowga/xanuunka qabyta dhabarka ugu hoseeysa,waxana sido kale ay kordhiyaan dabacsanaan xagga kala goysyadda , haddii si fiican loo sameeyo.
Daraasadan oo wargeyska «The Independent» ee British ka ah uu kasoo xigtay Majalladda Caalamiga ah ee Daraasadaha iyo nidaamka Engineering ka ee «International Journal of industry and engineering systems» ayaa lagu faafiyay in dhaqdhaqaaqa isku xig-xiga ee joogtada ah inta lagu guda jiro Salaadda aynan kaliya keenin inay saarto daal jidheedka, laakiin sidoo kale dhab ahaan ay ka caawin karto in ay ka hortagto xanuunada/laxowyada jilbaha iyo laf-dhabarta .
Majalladdan ayaa waxa ay u faahfaahisay akhristayaasheeda in Muslimiintu ay sameeyaan dhaqdhaqaaaqyo soo noqnoqda 5 salaaddooda ugu yaraan 5 goor maalintii waxana ay u macneeysay habka Rukuucda iyo Sujuuda.
Madaxa diyaariyay daraasadan Maxammad Al-Khasawanah ayaa sheegay «In ay dhici karto in laga fikiro dhaqdhaqaaqayadan marka laga eego jimicsiga yoga ah oo lagu ku taliyo iyada si looga hortaggo xanuunadda dhabarka».
Majalladdan ayaa sheegtay in daraasadan ay ku jirtay qaybta nidaamka digital ka oo mataalada lagu sameeyo dhaqdhaqaaqa jidhka ee loo baahan yahay inta lagu jiro salaadda iyo sida ay u saameeyn karto jidhka,iyada oo matalaadan digital ka ah lagu faafin doono majallad cilmiyeedka daraasaddaha iyo engineering ka.
Waxa ay tilmaamtay majalladdan in daraasaddan matalaadda nidaamka digital ka ah lagu isticmaalay rag iyo haween gobollo kala duwan oo kamid ah dunida oo dhan si loo baadho saameeynta Salaadda ee yareeynta xanuunada dhabarka.
Waxa qaybo kamid ah natiijooyinka ay gaadhay daraasaddani lagu cadeeyay in ay jirto dhabta ah, oo ay kamid tahay Sujuuda inay kordhiso dabacsanaan seedaha qaybaha dhabarka, taas oo ka caawisa in laga gudbo dareenka xanuunada.
« ‘Wilders racist, fascist mind’ reflects in Dutch gov’t	» Raysal wasaaraha Scotland oo codsatay in la qabto afti madaxbanaani ah dhamaadka 2018